Who We Are | Mandalay FM Radio
Mandalay FM Radio Station Profile
စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်သောနေ့ : (၂ဝဝ၈)ခုနှစ် ၊ ဧပြီလ (၃)ရက်
ထုတ်လွှင့်ချိန် နှင့် ထုတ်လွှင့်သည့်စနစ်များ
(၃.၄.၂ဝဝ၈) မှ (၁၆.၄.၂ဝဝ၈) ထိ တစ်နေ့လျှင် (၂)ကြိမ် (၁ဝ)နာရီ
(၂၇.၄.၂ဝဝ၈) မှ (၁၇.၁၁.၂ဝဝ၈) ထိ တစ်နေ့လျှင် (၃)ကြိမ် (၁၅)နာရီ
(၁၈.၁၁.၂ဝဝ၈) မှ ယနေ့အထိ တစ်နေ့လျှင် (၁)ကြိမ်တည်း (၁၈)နာရီ ထုတ်လွှင့်လျှက် ရှိပါသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်ဆက်တိုက် မန္တလေးမြို့တော်ဝန် မဟာသင်္ကြန်မဏ္ဍပ်မှ ဖွင့်ပွဲ၊ပိတ်ပွဲနှင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကို မန္တလေးမြို့အနီး ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသများအား တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု စနစ်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးမြို့တည် နန်းတည်နှစ်(၁၅ဝ)ပြည့်အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ၂ဝဝ၉ခုနှစ်၊ မေလ ၊ ၁ဝရက်နေ့ ည(၇:ဝဝ)နာရီတွင် မန္တလေးမြို့ရှိ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ၌ ဂန္တဝင်ရေဒီယိုအဆိုတော်ကြီးများ၏ ရွှေမန္တလေးည တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲကို Mandalay FM မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ငွေကျပ်သိန်းတစ်ရာလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အခြားသော လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲအစည်းနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။
ထုတ်လွှင့်သည့် Frequency နှင့် Coverage Area
87.9 MHz ဖြင့် မန္တလေးမြို့နှင့် မိုင်(၉ဝ)ပတ်လည် တောင်ငူမြို့နှင့် မိုင်(၃ဝ)ပတ်လည် ရန်ကုန်မြို့နှင့် မိုင်(၆ဝ)ပတ်လည် ၊ 88.3MHz ဖြင့် နေပြည်တော် (ပျဉ်းမနား)နှင့် မိုင်(၃ဝ)ပတ်လည်
Mandalay FM is format radio station which is launched in 2008. The radio station broadcasts from Yangon and it reaches 90 miles perimeter of Mandalay, 30 miles perimeter of Taunggu, 60 miles perimeter of Yangon with 87.9 MHz and 30 miles perimeter of Nay Pyi Daw with 88.3 MHz. It is dedicated for audiences from 25 to 50 years of age and covers around 10 millions of population. Mandalay FM is one of the top FMs in Myanmar. The people from Urban areas are the strong listeners of Mandalay FM.
Mandalay FM changed its profile in 2013 May to live broadcasting system with live radio show contents. Before 2013, Mandalay FM is broadcasted pre recorded music based programs like other FMs in Myanmar. In 2013, Mandalay FM made history of very first live radio show and very first traffic report announcement in Myanmar. The listenership increased because of friendly live radio show contents and traffic report. And Audience Participation contents are also very successful programs of Mandalay FM.